DOWNLOAD GRAMPS FREE NA KỌMPUTA GỊ. - MMEMME NYOCHA - 2019
Ngwá ọka 4.2.6
Ọtụtụ ma ọ dịkarịa ala otu mgbe ha chere banyere mweghachi nke foto ochie na oji. Imirikiti ihe oyiyi ndị a na-akpọ soapboxes gbanwere na usoro dijitalụ, ma ha enwetaghị agba ọ bụla. Ihe ngwọta maka nsogbu nke ịtụgharị ihe oyiyi na-acha ọcha na agba dị nnọọ ike, ma ruo n'ókè ụfọdụ ịnweta.
Tụgharịa foto na-acha oji na nke dị na agba
Ọ bụrụ na ị na-eme foto na-acha odo odo na oji naanị, mgbe ị na-edozi nsogbu ahụ na-abụghị nke ọzọ, ọ na-esiri gị ike karị. Kọmputa chọrọ ịghọta otú e si agba otu mpempe akwụkwọ, nke gunyere ọtụtụ pikselụ. Ruo oge ụfọdụ ugbu a, saịtị ahụ e depụtara n'isiokwu anyị na-ekwu banyere mbipụta a. Ruo nke a bụ naanị nhọrọ nhọrọ nke na-arụ ọrụ na ọnọdụ nhazi akpaka.
Hụkwa: Na-acha odo odo na oji ọcha na Photoshop
Ọ bụ algorithmia, bụ nke na-eme ọtụtụ narị ndị ọzọ algọridim dị mma, na-edozi Black. Nke a bụ otu n'ime ọrụ ọhụrụ na-aga nke ọma nke jisiri ike iju ndị ọrụ netwọk anya. Ọ na-adabere na ọgụgụ isi nke dabeere na netwọk nke na-ahọrọ ụcha ndị dị mkpa maka foto ahụ a kwụrụ n'elu. N'ikwu eziokwu, foto a na-achịkọta anaghị emezu mgbe niile, ma taa ọrụ ahụ na-egosi nsonaazụ dị ịtụnanya. Na mgbakwunye na faịlụ sitere na kọmpụta, Koloriz Black nwere ike ịrụ ọrụ na foto site na Ịntanetị.
Gaa na ọrụ Colorize Black
Na ibe ụlọ pịa bọtịnụ "UPLOAD".
Họrọ foto ịhazi, pịa ya, wee pịa "Meghee" n'otu window.
Chere ruo mgbe ị na-ahọrọ ụcha achọrọ maka onyinyo ahụ.
Bugharịa onye na-acha odo odo dị iche iche ka o wee hụ ihe ga-esi na nhazi ihe oyiyi ahụ dum.
Ọ ga-adị mkpirikpi dị ka ndị a:
Wepu faịlụ agwụla na kọmputa gị site na iji otu nhọrọ.
Zọpụta onyinyo ahụ nke odo odo na-ekewa na ọkara (1);
Zọpụta foto zuru ezu (2).
Foto gị ga-ebudatara na kọmputa site na ihe nchọgharị. Na Google Chrome, ọ dị ka nke a:
Nsonaazụ nke nhazi ihe oyiyi na-egosi na ọgụgụ isi nke na-adabere na ụlọ ọrụ ntanetịbeghị akabebeghị nke ọma ịmalite ịgbanwere oji na oji foto n'ime agba. Otú ọ dị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na foto ndị mmadụ ma na-ese ihu ha karịa ma ọ bụ karịa. Ọ bụ ezie na a na-ahọrọ agba ndị dị n'isiokwu na-ezighị ezi, Colorize Black algorithm ahọrọ ụfọdụ n'ime agba ahụ nke ọma. Ruo ugbu a, nke a bụ nanị ụdị nsụgharị nke akpaghachị akpaghachị nke foto elere anya n'ime otu agba.